स्वास्थ्यकर्मी संघको अध्यक्षमा घिमिरे,अरु पदमा को–को निर्वाचित भए ? (मतसहित) - Health Today Nepal
स्वास्थ्यकर्मी संघको अध्यक्षमा घिमिरे,अरु पदमा को–को निर्वाचित भए ? (मतसहित)
काठमाडौ,२५ कात्तिकः आफ्ना प्रतिस्पर्धी ओम उपाध्यायलाई ११४ मत अन्तरले हराउँदै नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघको अध्यक्षमा रामजी घिमिरे विजयी भएका छन् ।अध्यक्ष पदमा घिमिरेले ३३१ मत पाए भने उपाध्यायले २१७ मत पाए । घिमिरेले संघमा लगातार तीन कार्यकाल अध्यक्ष बनेका छन् । यसअघि उनी दुई पटक संघको अध्यक्ष भईसकेका छन् ।
यस्तै, यस्तै,बरिष्ठ उपाध्यक्षमा रामचन्द्र साह २६२ मतका साथ विजयी भएका छन् । उनको निकटतम प्रतिस्पर्धी दीपक मुडभरीले १६७ मत र अर्का प्रतिस्पर्धी भवानी शर्माले ९९ मत ल्याए । खुल्ला उपाध्यक्षमा रमिला चौलागाईँ ३३१ मतका साथ विजयी भईन् । उनको प्रतिस्पर्धी निराकुमारी निरौँलाले १८१ मत प्राप्त गरिन् । यस्तै, उपाध्यक्ष सरकारी तर्फ किरण ओली २८८ मतका साथ विजयी भए । उनका प्रतिस्पर्धी राज नारायण मण्डलले २०७ मत पाए ।
उपाध्यक्ष निजी तर्फ साहिला गिरीले २३२ मत प्राप्त गरिन्। उनको निकटतम प्रतिस्पर्धी महेन्द्र थापाले १५४ मत र केदार रिजालले १०५ मत पाए । महासचिवमा दीपक भट्टले ३१९ मतका साथ विजयी भएका छन् । उनका प्रतिस्पर्धी शंकर कंडेलले २२० मत ल्याए । यस्तै, कोषाध्यक्षमा सुरेश पासवानले जित हासिल गरेका छन्। पासवानले प्रतिस्पर्धामा राजकुमार तिवारीलाई पराजित गरेका हुन् ।
स‌ंघको निर्वाचनमा ५७२ मत खसेको थियो । आईतबार बिहान ८ बजेबाट सुरु भएको मतदान १२ बजे सकिएको थियो । मतगणना भने २ बजेपछि सुरु भएको थियो। देशभरबाट आएका करिब ७७१ मतदाताले संघको नयाँ नेतृत्वका लागि मतदान गरेका थिए ।
Previous article ॐ चावहिल डेन्टल हस्पिटल र जर्मन नेपाल सहयोग संघबिच सम्झौता
Next article अबैध शुल्क फिर्ता गर्न मेडिकल कलेजहरूलाई फेरी १५ दिने अल्टिमेटम